U-Oppo ubhengeza uthotho lweReno kunye nefowuni entsha ka-Epreli | I-Androidsis
Oppo Reno, i-smartphone elandelayo ene-Snapdragon 855 ebhengezwe ngokusesikweni ngo-Epreli
Kwiiyure ezimbalwa ezidlulileyo, uSekela Mongameli we-Oppo uBrian Shen ubhengeze uthotho lweefowuni zika-Oppo, kwaye ibizwa ngokuba yi 'Reno'. Ilogo yosapho olulandelayo nayo ityhiliwe, esebenzisa imibala eqaqambileyo, ebonisa ukuba inokuthi ijolise kubaphulaphuli abancinci.
Ngapha koko, umenzi we-smartphone esekwe e-China ukwatyhile oko I-smartphone yokuqala kolu ngcelele iya kuba yi-Oppo Reno. Iinkcukacha ezithe kratya apha ngezantsi.
Umphathi, kwisibhengezo sakhe, wayazisa loo nto Isiphelo sendlela yokusebenza okuphezulu siza kuphehlelelwa nge-10 ka-Epreli e-China. Akukho lwazi longezelelekileyo oluhambelana nolu hlaziyo lwe-smartphone olukhoyo ngoku, kodwa isenokuba siselfowuni esiza ne I-teknoloji ye-10X yokulahleka kwe-opticalkuhle inkampani kulindeleke ukuba iphehlelele isiphelo sendlela kule nto intsha kwinyanga ezayo.
Ngaphambili, inkampani yayiveze ukuba i-smartphone eza kutyhilwa ngo-Epreli iya kuxhotyiswa yiprosesa yaseQualcomm yamva nje kwaye inamandla ukuza kuthi ga ngoku: i Snapdragon 855 I-7nm engundoqo.
Kwelinye icala, uShen Yiren uyingqinisile loo nto isixhobo siza kunikwa amandla libhetri yomthamo eyi-4,065 mAh. Ngelixa ungakhange ukhankanye nantoni na malunga nenkxaso yokutshaja ngokukhawuleza, silindele ukuba i-smartphone ibe nenkampani enamandla yokutshaja ngokukhawuleza.
Ifemi ikwavezile ukuba iyakuba nayo ngaphezulu kwesigidi seeyunithi kwisitokhwe salesi siphelo siphezulu silandelayo xa kusungulwa. Ngapha koko, wongeze ukuba uya kuzama ukugcina i-headphone ye-3,5mm kwii-smartphones zakhe, into uninzi lwabasebenzisi olusayame kuyo. Nangona kunjalo, kuya kuhlala kubonakala ukuba isixhobo siya kuyigcina le nkcazo yezobuchwephesha, engaqinisekiswanga kwaye ishiye abaninzi ukuba balinde.
Umendo opheleleyo kwinqaku: I-Androidsis » Izaziso » Oppo Reno, i-smartphone elandelayo ene-Snapdragon 855 ebhengezwe ngokusesikweni ngo-Epreli
IHuawei P30 Lite ibonisa umsipha kwezi benchmark
Ukhuseleko lwe-Android: Konke malunga neemvume zesicelo, ukunika okanye ukungavumi?